ISIXAKAXAKA KUBUYISELWA UKAUNDA KWESOBUMEYA ETHEKWINI - Ilanga News
Home Izindaba ISIXAKAXAKA KUBUYISELWA UKAUNDA KWESOBUMEYA ETHEKWINI
ISIXAKAXAKA KUBUYISELWA UKAUNDA KWESOBUMEYA ETHEKWINI
Kuqubuke izinsolo zomgwazo ngesesekela lemeya
UMNU Mxolisi Kaunda obuyiselwe esikhundleni sobumeya kumasipala waseThekwini emhlanganweni obuyizolo
ngoLwesithathu eCity Hall, kuleli dolobha. UMnu Philani Mavundla (okwesokudla) we-ABC engomakoti kulo masipala, uthole esesekela-meya.
UTHWALE kanzima uSomlomo weTheku, uMnu ThabaniNyawose, ngesikhathi kuqhubeka umhlangano wokuqoka imeya nephini layo, izolo ngoLwesithathu e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eThekwini. Silobe izolo sekubuyiselwe ngevoti, uMnu Mxolisi Kaunda (osesithombeni) kwesobumeya.
Umhlangano wayizolo ubulama owangoMsombuluko okwasukakuwona izixakaxaka eMoses Mabhida Stadium, kugasela amalungu omphakathi ayedlubhe imibala ye-ANC, kwacisha nogesi, wagcina uhlehlisiwe. Ngaphambi kokuqala komhlangano wayizolo, uMnu Nyawose oqokwe ngoMsombuluko ukuba ngusomlomo uqale ngokuxolisa ngokwenzeke eMoses Mabhida, wathembisa ukuthi usazothola umbiko ogcwele ngembangela yakho.
Ngesikhathi sekumele uqale umhlangano, amakhansela athwalise kanzima uMnu Nyawose ephakamisa imibono eyahlukene. UDkt Makhosi Khoza we-Action-SA, uphakamise ukuthi kuphenywe ukuthi kungani umhlangano wangoMsombuluko wahlelelwa eMoses Mabhida futhi etendeni kunokuthi uyiswe e-ICC.
Okunye okudale impikiswano izolo wukufakwa kwegama lika Mnu Philani Mavundla we-Abantu Botho Congress (ABC), esigungwini esiphezulu somkhandlu, efakwa yi-ANC ngemuva kokwesula kwelinye ilungu layo kulesi sigungu. Amaqembu okubalwa kuwona i-IFP ne-EFF, akhombise ukungahambisani nalolu shintsho, okuholele ekutheni i-IFP isonge ngokuthi kuzohlanganwa enkantolo ngenxa yesinqumo sokuvumela igama likaMnu Mavundla.
I-EFF nayo ithe izofuna umbono wezomthetho ngokumele ikwenze ngalokhu. Kuphinde kwaba nomunye umsindo ngaphambi kokuba kuvotwe, ngesikhathi i-IFP ne EFF bephakamisa ukuthi kubalwe amakhansela angaphakathi azovota ngokusemthethweni. UMnu Nyawose uwaqinisekisile amakhansela ukuthi isibalo sabazovota kulolu khetho obekuqhathwe kulona uMnu Kaunda we- ANC noNkz Nicole Graham we-DA siwu-219 njengoba eze wabiza abamele amaqembu ukuba bayosiqinisekisa.
Umhlangano wayizolo ukhombise ukushuba ngesikhathi kusabalala imibiko ethi uMnu Mavundla ufunjathisiwe ukuze agcine engena embhedeni owodwa ne-ANC njengoba ngoMsombuluko ubevuma ingoma ekhazimulisa i-DA. Ebuzwa ngabezindaba uMnu Mavundla, ukuphikile ukuthi kunenkece afunjathiswe yona ukuze adanse noKhongolose.
I-ANC ngomlomo womkhulumeli wayo KwaZulu-Natal, uMnu Nhlakanipho Ntombela, ikuphikile ukuthi kunemali ekhokhelwe amaqembu amancane, okubalwa noMnu Mavundla ukuze bambathe ingubo eyodwa nayo. UMnu Mavundla uthe isizathu sokushintsha kwakhe wukuthi i-ANC isifundile isifundo, kanti yena akasazimisele ngokuvota “nezivakashi” (abelungu).
Kulo mhlangano ezokuphepha beziqinisiwe ngaphakathi nangaphandle njengoba bekunengebhe yokuthi hleze kuphinde okwango Msombuluko. Amaphoyisa ezinhlakaezahlukene abenkanise ngaphandle nangaphakathi e-ICC, njengoba ekumele bugcinwe bukhethiwe ubuholi balo masipala omkhulu KwaZulu-Natal.
UMnu Kaunda ubuyiselwe kwesobumeya ngamavoti awu-113 kwathi imbangi yakhe uNkz Graham yathola awu-104. Amavoti amabili amoshekile ngokusho kukaMnu Nyawose ngesikhathi ememezela imiphumela. Emuva kokuqokwa kwemeya kube sekuqhubeka uhlelo lokuqokwa kwephini layo njengoba kuphakanyiswe amagama amabili, elikaMnu Mdu Nkosi we-IFP nelikaMnu Mavundla.
UMnu Mavundla nguyena ogcine evotelwa kakhulu kulesi sikhundla njengoba evotelwe ngamakhansela awu-113 kwathi imbangi yakhe yathola awu-104 kwabe sekumosheka amavoti amabili.
Previous articleZiyaqonga izinkinga zombango wesihlalo sobukhosi bukaZulu
Next articleIChiefs ifake usawoti esilondeni seziNyoni